Olee otú Iji nwalee Speed ​​maka Android
Anwale Internet Speed ​​on Android
Iji malite-anwale internet ọsọ na gị android ngwaọrụ, gaba ka ndị a:
1. Gaa Google Play Echekwala na gị android ngwaọrụ na pịnyere "speedtest.net". Họrọ ngwa akara ọsọ ule site Ookla.
2. Kpatụ wụnye button na-eche maka echichi mezue. Ị nwere ike soro ọganihu nke download na ngosi mmanya.
3. Ozugbo echichi zuru ezu, ịchọta ndị "Speedtest" na akara ngosi na gị android ngwaọrụ na enweta ya na-emeghe ngwa.
4. Mgbe ngwa ga-emepe enweta na "na-amalite Ule" button na-egosi na etiti nke ihuenyo.
5. The ngwa ga-amalite iji nwalee ị download na bulite ọsọ obere oge. Ụzọ na-download ọsọ ga-anwale.
6. Ma e mesịa, ndị internet bulite ọsọ ga-anwale.
7. The ga-arụpụta ga-emere na njedebe nke internet ọsọ ule ka ndị a:
Otu Android ịrụ ọrụ na-adabere ọtụtụ dị iche iche ihe. Ọ bụ Nchikota CPU, GPU, ebe nchekwa, bandwit na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na-anwale arụmọrụ nke gị android na-akwanyere CPU na GPU ọsọ, ị pụrụ ime ka ojiji nke onye na ngwa dị ka Ngwaọrụ Control nke na-ahapụ gị tweak usoro na OS ntọala. Iji dị otú ahụ ngwa ị nwere ike overclock ma ọ bụ underclock gị CPU na N'otu aka ahụ Iwe Iwe Ọkụ na ndị ọzọ usoro ntọala ịhụ mmetụta nke onye ọ bụla na mkpokọta arụmọrụ nke gị android. N'otu aka ahụ, iji nwalee arụmọrụ nke gị android na-akwanyere ndịna-emeputa ị pụrụ ime ka ojiji nke BaseMarkX; ihe ngwa kpọmkwem iji nwalee 2D na 3D graphic na-agba ọsọ ikike nke ihe android na-eji nke ịdị n'otu 3D engine.
Otú ọ dị, na-anwale arụmọrụ nke gị android iji dị otú ahụ ngwa otu otu maka onye ọ bụla arụmọrụ ga-bụghị naanị weghara a otutu oge gị, o nwere ike ghọọ oké hassle. Ya mere, na-esote nke isiokwu a atụmatụ ụfọdụ Atụmatụ na usoro na i nwere ike iji nwaa gị android arụmọrụ na ala.
Atụmatụ na usoro maka Android Speed ​​Ule
Ị nwere ike mgbe niile ime ka ojiji nke ngwa ọdịnala na e akpan kenyere iji nwalee ihe android ịrụ ọrụ. Dị otú ahụ ngwa ọdịnala na-mara dị Benchmarking ngwa ọdịnala na a dum ọtụtụ n'ime ha nwere ike ibudatara na Google Play Store. Anyị a ga-ewere a lee anya na ihe kasị mma atọ ke ibuotikọ emi.
Antutu benchmark bụ ihe android Benchmarking ngwaọrụ nke nwalee gị android ngwaọrụ perfromance na ndabere nke ụfọdụ predefined kwa ka CPU arụmọrụ, 2D ndịna-emeputa arụmọrụ na 3D graphic arụmọrụ wdg Ọ bụ maka free na Google Play Echekwala na dị nnọọ ewu ewu n'etiti ọrụ na-achọ nwalee ha android arụmọrụ.
Iji nwalee gị android si ọsọ iji Antutu benchmark ngwa, eso ndị a:
1. Downlaod na wụnye Antutu benchmark gị android ngwaọrụ site https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark&hl=en. Chere maka nwụnye usoro iji wuchaa na ẹkedori ngwa gị android ngwaọrụ.
2. Ke taabụ akara "Ule" see "Ule" bọtịnụ iji malite Benchmarking usoro. Additonally, ị nwere ike ịgbanwee gaa na "Ngwaọrụ Info" taabụ iji gosipụta nkọwa banyere ngwaọrụ gị.
3. Antutu benchmark ga-anwale ngwaọrụ gị arụmọrụ megide a ọnụ ọgụgụ nke parameters dị ka CPU na Ram ọsọ wdg na-egosipụta na gị pụta. Ị nwere ike na-agba ọsọ ule ọzọ site ọkụkụ "Ule Ọzọ button" ma ọ bụ ị pụrụ igosipụta zuru ezu results iji button akara "Details".
4. Ọzọkwa, Antutu benchmark na-ahapụ ọrụ tụnyere n'etiti perfromance results nke ngwaọrụ abụọ.
Vellamo Mobile benchmark bụ a Benchmarking ngwa site Qualcom nke tumadi na-elekwasị anya ule nchọgharị ọsọ na mgbakwunye na ule CPU, ebe nchekwa, na bandwit ule. Ọ gụnyekwara a Multicore mode na-anwale arụmọrụ nke eri latency na njikwa.
Iji mee ka ojiji nke Vellamo Mobile benchmark nwalee gị Android si ọsọ, na-eso ndị a dị mfe ntụziaka:
Downlaod na wụnye Vellamo Mobile benchmark gị android ngwaọrụ site https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicinc.vellamo&hl=en. Chere maka nwụnye usoro iji wuchaa na ẹkedori ngwa gị android ngwaọrụ.
Họrọ ụdị nke ule na ị chọrọ ịgba ọsọ na ngwaọrụ gị site na ịpị akụ button kwekọrọ na ule ahụ. E a dịgasị iche iche nke teste dị na Vellamo Mobile benchmark ngwa.
Mgbe ẹkụre ule i nwere ike inyochaa nsonaazụ na ngwaọrụ ndị ọzọ kwa.
PassMark Performance Ule
PassMark Performance ule bụ a na-ewu ewu android Benchmarking na ngwa na-nwere ike ibudata for free si Google Play Store. Ọ na-achọpụtazi android arụmọrụ megide ụfọdụ CPU, ndịna-emeputa, na ebe nchekwa na usoro ule. The ule results nwere ike mgbe ahụ-rubere ngwa si ​​website na a pụrụ iji tụnyere megide ule results nke ngwaọrụ ndị ọzọ.
Iji malite anwale gị android si arụmọrụ site na iji PassMark Performance Ule, gaba ka ndị a:
Download na wụnye PassMark Performance ngwa si ​​https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passmark.pt_mobile&hl=en na wụnye ya na gị na mobile. Chere maka echichi mezue na ẹkedori ngwa gị android ngwaọrụ.
Ị nwere ike họrọ onye ule site na-ahọpụta onye ọ bụla n'ime ya kwekọrọ ekwekọ Atiya ma ọ bụ ị pụrụ nanị agba ọsọ niile ule otu otu site ọkụkụ "Run benchmark" button na ala nke ihuenyo.
Ngwa ga-agba ọsọ niile ule otu otu on na-akpaghị aka na-egosipụta na niile ọtụtụ nke onye ọ bụla udi na-amụta n'ụlọ nakwa dị ka n'otu n'otu dị ka e gosiri n'okpuru.
The cumulative ule nwere ike na-egosipụta site na nanị n'ibelata edemede dị ka e gosiri ndị na-esonụ ọgụgụ.
A pụta nwere ike mgbe ahụ tụnyere na-arụpụta nke ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ihi nke a, ịgbanwee gaa na taabụ akara "Tụlee". The comparative ga-arụpụta ga-emere ka ndị a:
Kies-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ Ijikọ, ebe a bụ Solutions
> Resource> Android> Olee Iji nwalee Speed ​​maka Android